Wednesday July 22, 2020 - 17:41:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka ugu saarreeya dowladad Mareykanka ayaa qiray in cudurka Carona Virus uu halis weyn ku hayo shacabka American-ka ah iyagoona walaac ka muujiyay in cudurka oo gallaafan doono nolosha kumanaan kun oo ruux.
Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa shirkii jaraa'id ee ugu horreeyay ee uu ka qabtay arrinta Carona Virus tan iyo bishii Apriil ee lasoo dhaafay wuxuu shalay ka sheegay caddeymo yaab leh oo ku saabsan dhibaatada uu caabuqan ka geysanayo wadankiisa.
isagoo saxafiyiinta kula hadlayay magaalada washington ayuu carabaabay in dhammaan dadaalladii ay sameeyeen ee lagu doonayay in cudurka lagu xakameeyo aysan guulaysan "waan qirayaa xaaladdu waa sii xumaan doontaa ka hor inta aysan soo wanaagsanaan waan ka xumahay in aan sidaas iraahdo ma aheyn wax aan jecelahay laakin xaqiiqdu waa sidaas" ayuu Trump oo isagoo niyad jabsan qalabka warbaahinta kasoo hor muuqday.
hoggaamiyaha Mareykanka ayaa qaar kamid ah gobollada wadankaas ku ammaanay in ay si wanaagsan ula tacaamuleen safmareenka Carona halka kuwa kale ay habacsanaan daran ka muuqato waana meelaha ugu daran ee caabuqu uu gummaadka ka geysanayo.
Donald Trump oo umuuqday mid hadalladiisu isburinayaan ayaan bulshada American-ka ah ugu baaqay in ay xirtaan maaskada sanka iyo afka lagashado ee Carona looga gaashaanto islamarkaana ay kala fogaadaan, isbuucii lasoo dhaafay ayuu hoggaamiyahan axmaqa ah ku goodiyay in uu tallaab ka qaadi doono mas'uulkii shacabka qasba in ay xirtaan maaskada Karoona.
"waxaan ka dalbanaynaa dhammaan kuwa aan awoodin in ay kala fogaan waa in ay xirtaan afgashiga iyo faafidda cudurka loo yareeyo" ayuu markale yiri Trump.
wuxuu soo hadal qaaday dib udhaca ku yimid talaalkii ay horay uballan qaadeen shirkadaha waaweyn ee daawada soo saara wuxuuna dib udhacaas sabab uga dhigay horumarin lagu sameynayo tayada daawada.
bilaawgii faafitaanka Carona Virus ee Shiinaha ayu Trump aad ugu jeesjeesay wuxuuna ku tilmaamay jiray cudur shiinayska ugaar ah balse markii uu wadankiisa soo gaaray ayuu afka furtay kuna dhawaaqay in dad gaaraya 200 oo kun American ah ay udhiman doonaan cudurkan.
Dalka Mareykanka waa dalka koowaad ee caalami ahaan dadkiisu Carona ladhibanyihiin waxayna dhimashadu gaartay 143 kun halka kaalinta labaad uu kujiro dalka Baraaziil.